Warbixin kooban ee macadka & boggiisa – Machadka Iqra
Warbixin kooban ee macadka & boggiisa
* Alle ayaa mahad leh mar walba , rasuulkiisana nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaato.
* waxa la asaasay machadka taariikhda : 10/10/2010 .
Bogga machadka IQRA / Badhan :
* waxaa loo furay si ay uga faa’iideystaan dadka debedda waddanka ka jooga , hadday u baahdaan:
A ) Quraanka kariimka ah in ay ku bartaan ayaga iyo ilmahoodaba online ahaan.
B ) looga jawaabo su’aalahooda shareecada ay ka rabaan.
C ) looga wacyi geliyo, duruus sharci ahna looga galo, iyo muxaadarooyin.
D ) in aan wixii kusoo cusboonaada halkan kasii deynno, sida xafladda furitaanka ee sannadkii mar la qabto horraankiis,taas oo lagu bixiyo shahaadooyinka ardayda qalinjebisey ,iyo shahaadooyin-sharaf ,la siiyo dadka gacanta ka geysta had iyo jeed ( maskax iyo maalba) hab usocodka machadka shareecada.
Alle baa mahad leh mar walba.
Waxaa diyaariyey : Dr cabdirashiid sheekh saalax ( Abuusaalix )